Real Madrid Oo Urursatay Abaal Marinihii Ugu Muhiimsanaa Ee Globe Soccer Awards 2017 | Raadgoob
Real Madrid Oo Urursatay Abaal Marinihii Ugu Muhiimsanaa Ee Globe Soccer Awards 2017
Waxaa la bixinayay abaal marinaha Globe Soccer Awards 2017 oo markii siddeedaad lagu qabtay Dubai iyada sanad kasta xafladan la qabtoDecember 28 waxaana lagu bixiyaa abaal marino badan oo ay ka mid yihiin xidiga sanadka ugu fiican aduunka, macalinkii, kooxdii, garsoorihii iyo shaqsiyaadii kubbada cagta ugu fiicnaa sanadkan dhamaadka ah. Wax kale oo sanadkan la soo korhdiyay abaal marinta horyaalka aduunka ugu fiican.
Horyaalka Spain ee La Liga ayaa loo doortay horyaalkii sanadkan 2017 ugu fiicanaa iyada oo abaal marintan uu gudoomay madax waynaha horyaalka La Liga ee Javier Tebas kaas oo sheegay in abaal marintani uu leeyahay ciyaartoy kasta oo Spain ka ciyaara iyo koox kasta oo Spain ka ciyaarta wuxuuna ka mahad celiyay in horyaalka uu madax waynaha ka yahay abaal marintan la gudoonsiiyay.
Garsoorihii ugu fiicnaa sanadkan 2017 ayaa loo doortay garsooraha ree Germany ee Felix Brych kaas oo si bilaa muran ah u dhex dhexaadiyay kulankii ugu waynaa ee finalkii Champions League ee soo dhex maray kooxaha Real Madrid iyo Juventus wuxuuna Felix Brych si wayn ugu mahad celiyay kooxda garsoorkiisa ee kulamada la shaqeeya wuxuuna carabka ku adkeeyay in iyaga la’aantood aanu shaqadan si fiican u qabteen.
Madax wayne ku xigeenka kooxda AS Monaco ee Vadim Vasilyev ayaa ku guulaystay abaal marinta madax fulintii sanadkan 2017 aduunka ugu fiicnaa kaas oo si layaableh uga shaqeeyay horumarkii ay kooxdiisu sanadkan ku talaabsatay.
Kabtankii hore ee kooxda Barcelona ee Carles Puyol ayaa ku guulaystay abaal marinta ‘Player Career Award’ ee uu bixiyo madax waynaha FIFA ee Gianni Infantino kaas oo ah kabtanka kaliya ee ilaa hadda lix koob gudoomay taariikhda kubbada cagta wuxuuna Puyol ka mid ahaa halyo kubbada cagta ahaa oo xafladan ka soo muuqday.
Wakiilka Jorge Mendes ayaa wali sii wata in uu abaal marintan iska yeeshay wuxuuna markii 7 aad ku guulaystay wakiilka kubbada cagta aduunka ugu fiican.
Real Madrid ayaa ku guulaysatay abaal marinta kooxda sanadkan 2017 ugu fiican kadib markii ay noqotay kooxda Championska Spain, Yurub iyo aduunka isla markaana ay shan koob ku soo guulaysatay waxayna abaal marintan ku garaacday kooxaha Manchester United iyo AS Monaco. Zinedine Zidane ayaa kooxdiisa u gudoomay abaal marinta kooxda aduunka ugu fiican.
Zinedine Zidane ayaa sidoo kale ku guulaysatay abaal marinta macalinka aduunka ugu fiican ee Globe Soccer Award 2017 kadib markii uu soo qaatay sanad taariikhi ah isla markaana uu shan koob u soo hogaamiyay wuxuuan Zidane u mahad celiyay kooxdiisa Madrid isaga oo xafladan ku gudoomay abaal marintan. Zidane ayaa abaal marintan ku garaacay tababarayaasha ree Talyaani ee Allegri iyo Conte oo macalimiin ka ah Juventus iyo Chelsea.
Zidane oo markii labaad masraxa ku soo laabtay si uu abaal marintiisa u gudoomo ayaa u mahad celiyay madax waynaha kooxdiisa, ciyaartoydii uu guulaha badan ku soo gaadhay ee Real Madrid.
Cristiano Ronaldo ayaa markale ku guulaysatay abaal marinta xidiga aduunka ugu fiican ee Globe Soccer Award 2017 kadib markii uu abaal marintan ku garaacay xidigaha kala ah Lionel Messi, Gianluigi Buffon, Kylian Mbappé , Neymar, Paulo Dybala iyo kabtankiisa Sergio Ramos.